ခြင်္သေ့ကိုက်သတ်လို့ သေဆုံးသွားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်။ – SoShwe
Home/Other/ခြင်္သေ့ကိုက်သတ်လို့ သေဆုံးသွားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်။
ခြင်္သေ့ကိုက်သတ်လို့ သေဆုံးသွားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတေ့ာ့ ချက်နိုင်ငံသား အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ သူမွေးထားတဲ့ ခြင်္သေ့ကိုက်သတ်လို့ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရပြီး ရဲတွေမှလည်း ထိုခြင်္သေ့ကို အသေပစ်သတ်၍ နောက်ထပ်မှုခင်းတွေမဖြစ်အောင် အချိန်မီ တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲတွေ့ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ၎င်းအမျိုးသားဟာ အသက် ၃၃နှစ်အရွယ်ရှိ Michal Prasek ဆိုသူဖြစ်ပြီး သူရဲ့နေအိမ်မှာ ၉ နှစ်သားအရွယ်ခြင်္သေ့တစ်ကောင်နဲ့ အခြားခြင်္သေ့အမ တစ်ကောကို မွေးမြူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေဟာလည်း ထိုခြင်္သေ့တွေကြောင့် အမြဲလိုလိုထိတ်လန့်နေရပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ရှေ့မှာရှိတဲ့ အန္တရာယ်ကို မမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သူ့ရဲ့အလောင်းကိုတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ခြင်္သေ့ရဲ့လှောင်အိမ်ထဲမှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး တကိုယ်လုံးမှာလည်း ခြင်္သေ့ကိုက်ခြစ်ကုတ်ဖဲ့ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆိုရင်လည်း တားမရတဲ့သားရဲ့ဆန္ဒကြောင့် အိမ်မှာ ခြင်္သေ့မွေးတာကို ခွင့်ပြုထားရပေမယ့် အခုလို သူမွေးထားတဲ့ခြင်္သေ့ကြီးကြောင့်ဘဲ သားဖြစ်သူသေဆုံးသွားကို မြင်တွေ့ရလိုက်တဲ့အတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
Previous Rita Ora နဲ့ Andrew Garfield တို့ တကယ်ပြတ်သွားကြပြီလား ? ? ?
Next Jennifer Lopez ??? ?????? ??????????????????